Antsirabe : Vola sandoka sy sokatra sarona (23-04-2018)
Miparitaka ny vola sandoka mivezivezy eto Antsirabe amin’izao, sarona ny tompon’antoka tamin’izy ity niampy ny namany iray izay nahatrarana sokatra maro be , rehefa nosavaina ny trano fonenany.
Fandrobana tetsy sy teroa : Olona sivy nosamborina ny asabotsy teo (23-04-2018)
Sinema ve sa tena fandrobana ity nitranga tao amin’ny magazay etsy Behoririka. Mbola mipetraka ny fanontaniana hatreto. Ny antony mantsy dia tsy nisy na inona na inona mihitsy tao anatin’ny magazay, na « vitrine » aza. Na izany aza anefa, dia nisy fanafihana izany.
Ilafy : Fasana roa indray vaky, taolambalo maromaro lasa (21-04-2018)
Ny herinandro teo iny dia nahenoana vaky fasana indray teny amin’iny faritra Ambohibe, Ankadikely Ilafy iny. Araka ny tatitra azo avy amin’ny zandarimarim-pirenana dia fasana roa no nisy namaky teny an-toerana. Vokany: taolambalo maromaro no lasan’ireo tsy mataho-tody tamin’izany.
Mangabe-Maevatanàna : Nilentika tao amin’ny reniranon’i Betsiboka ny lakana, olona iray maty. (21-04-2018)
Rendrika tao amin’ny reniranon’i Bestiboka sy Ikopa ny alahady 15 aprily lasa teo, tokony ho tamin’ny 07 ora maraina ny lakana. Niainga avy teny Mangabe izy telolahy mpitondra lakana. Katsaka miisa 12 gony no noentin’izy ireo ho eto Maevatanàna .
Marosako-Mahazomà : Mangazay voaroban’ny jiolahy, olona roa naratra mafy (21-04-2018)
Manao izay danin’ny kibony mihitsy ankehitriny ireo jiolahy mitam-piadiana ato amin’ny disitrikan’i Maevatanàna. Mangazay lehibe iray any amin’ny fokontany Marosako, kaominina Mahazomà, disitrikan’i Maevatanàna no nisehoan’ny fanafihana ny talata 17 aprily lasa teo, tokony ho tamin’ny 05 ora hariva.
Mandràka : Kamiao nivadika, roa no maty (21-04-2018)
Teo amin’ny PK 67+800 no nitranga ny lozam-pifamoivoizana. Izany hoe teo amin’ny fidinan’i Mandraka, kaominina Ambatolaona. Teo amin’ilay làlana manao kisary S no nivoaka ny làlana ny kamiao mpitondra entana izay mitondra ny laharana 10XXAH.
Ambohitromby-Ankazobe : Taxi-be no niharan-doza, olona maro naratra (21-04-2018)
Fiara mpitatitra olona taxi-be mihazo an’Ankazobe iny indray no niharan-doza teny ambony atsimon’Ambohitromby, ny alatsinainy 16 aprily lasa teo. Raha ny fanazavana azo dia nandeha mafy loatra ilay fiara, tsy voatanan’ny mpamily intsony ny familiana ka lasa tany amin’ny tsy tokony ho nalehany.
Halatra anaty « boutique » : Ramatoa telo nangalatra tetsy Analakely M.D (20-04-2018)
Samy nidoboka am-ponja avokoa izy telo vavy rehefa nandalo teny amin’ny fampanoavana. Ny roa voalohany dia mpihavana ihany ary tena mivelona amin’ny halatra anaty toeram-pivarotana.
Antsirabe : Jiolahy rain-dahiny maty voatifitry ny pôlisy (20-04-2018)
Nirefodrefotra indray ny basy tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra. Lehilahy iray fantatra fa efa jiolahy rain-dahiny ary efa matetika miditra am-ponja no voatifitry ny mpitandro filaminana tao amin’ny fokontany Antanambao Est Ivohitra, afak’omaly alina tokony ho tamin’ny 8 ora tany ho any.
RN4 : Voatery nasiana « déviation » (20-04-2018)
Eo akaikin’Andranofeno, amin’ny lalam-pirenena faha-efatra, no voatery nasiana làlana vonjimaika. Ny anton’izany dia noho ny fisian’ny kamiao lehibe iray izay nivoaka ny làlana ka naha-potika ny tetezana eo an-toerana.
• Analalava : Olona telo maty nokaikerin’ny alika romotra (20-04-2018)
• Seranan-tsambon’i Toamasina : Vary 1.000 kaontenera mihitsoka ao, efa maro ireo simba aminy (20-04-2018)
• Sambava : Lahiantitra 60 taona tra-tehaka nangalatra lavanila (20-04-2018)
• Toliara : Mpamaky trano voatondraka asidra (20-04-2018)